Malmö: Xaafada Soomaalidu ku nooshahay oo noqotay goobta Sweden ugu amaanka xun | Somaliska
Malmö: Xaafada Soomaalidu ku nooshahay oo noqotay goobta Sweden ugu amaanka xun
Xaafada Seved ee ay ku badanyihiin soo galootiga qaasatan Soomaalida ayaa noqotay goobaha ugu amaanka xun Sweden. Wargeyska Aftonbladet oo booqasho ku tagay wadada lagu magacaabo Rasmusgatan oo la sheegay in ay tahay goobta ugu amaanka liidata Sweden ayaa soo bandhigay in dadka goobtaas ku nool ay haysato cabsi joogto ah oo wadada ay maamulaan dhalinyaro gaangiistaro ah.
Wadada ayaa la sheegay in lagu iibiyo darooga isla markaana xitaa ay hubeysanyihiin qaar ka mid ah dhalinyarada halkaas degan. Booliiska ayaa sheegay in aysan aqbali doonin dabeecada nuucaas ah iyaga oo sheegay in ay kaamirooyin ku xiri doonaan wadadaas.
Dadka xaafada ku nool ayaa sheegay in ay goobtaas noqotay meel lama galaan ah oo xitaa dadkii mudada dheer ku noolaa ay hada ka cabsanayaan in ay dibada u soo baxaan. Dhibaatooyinka ugu badan ayaa waxaa ku qaba dadka boostada tuura iyo gaadiidka gargaarka degdega.
Ganacsatada ayaa bilaabay in ay isaga guuraan xaafadaas, maqaaxi goobta ku taala ayaa ku qasbanaatay in ay xiranto ka dib markii macaamiishii u imaan waayeen cabsi darteed.
Dhalinyarada qalalaasaha ka sameynaya xaafadaas ayaa ku doodaya in ay shaqo la’aanta ka jirta dalka ay u sababtahay dhibaatooyinka xaafada oo haddii ay shaqo haysan lahaayeen ay umada ka mid noqonlahaayeen. Waxay ku hanjabeen in haddii boolisku kaamiro ku xiraan halkaas ay si degdeg ah u burburin doonaan.
Ishii wararka cunsuriyiinta oo la xiray
Daawo mid ka mid ah darawalada basaska oo garaacaya nin qaxooti ah
Malmö: Stortorget waxa uu la midyahay fagaarayaasha Muqdisho
November 1, 2011 at 13:52
asc dhamaan aqrista yaasha hadaan fikirkeyga ka hadlo wey ila qaldanyihiin dadkaan ka geysanayo dhibaatoyinka
xaafada Seved ee somalida ku badantahay waana dad macgaca somaliyeed sumcad daro u sohoynayo oona nagu so jedinayo indhaha cunsuriyiinta haday shaqola aan heyso dhibaato lasameeyo shaqo laguma helo ee ee camal kale ha yeeshaaano hana ka waantoobano waxa eey wadaan ma aha wax fiicanee
samka nuura says:
November 1, 2011 at 15:04
ASC DHAMAAN DHALINYARADA WAXAAN IDIIN KU DARSAN LAHAA INAAD ALAAH KABAQDAAN KANADEYSAAN HALKAN WAXA AAD KASHEEGEYSAAN WAA QALAD IN QABIIL QABIIL LA ISKU CAAYO MALOOGU TALAGALIN HALKAAN ADAABTANA KUMA JIRTO INAAD HALKAAN KASHEEGTAAN WAXAAD RABTIIN FADLAN ALAAH HALAGA XISHOODO HANA LA ISKA ILAALIYO QABYAALADA INTAAS AYAAN IDINKU DARSAN LAHAA WALAALAYAAL